प्रधानमन्त्री ओलीको बर्थडेमा डेढ करोड खर्च « Daily News Bank
प्रधानमन्त्री ओलीको बर्थडेमा डेढ करोड खर्च
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार आफ्नो ६९औं जन्मदिन मनाए । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आइतबार बिहान जन्मदिन मनाएका प्रधानमन्त्री ओली दिउँसो आफ्नो पुख्र्याैली गाउँ तेह्रथुमस्थित आठराई पुगेर मनाए । बालुवाटारमा मनाएको उनको जन्मदिनले चर्चा नपाए पनि आठराईमा पुगेर मनाएको कार्यक्रमले चर्चामात्रै पाएन आलोचनाको सिकार पनि बन्यो । आठराईमा मनाएको प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मोत्सव कार्यक्रमलाई राजसीको संज्ञा पनि धेरैले दिए ।
आइतबार बिहान बालुवाटारमा केक हाटेर जन्मदिन मनाएका प्रधानमन्त्री ओली दिउँसो मन्त्री, सरकारी अधिकारी, नेता कार्यकर्ताको लावालस्कर लगाएर चारवटा हेलिकप्टरमा आठराईमा पुगेर १५ किलोको केक काटेर जन्मदिन मनाए । जहाँ ६ हजार जनालाई भोज खुवाइएको थियो । कतिपयले १० हजार जनालाई खुवाइएको पनि बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मोत्सव मनाउन आठराई गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदा नै दिएको थियो ।
निकै तामझामका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले आठराईमा मनाएको जन्मोत्सव कार्यक्रममा कति खर्च भयो होला ? झापादेखि क्याटरिङ आठराईमा लगेर ६ हजारलाई खुवाइएको भोज र विभिन्न बाँडिएको सामानको खर्च कति भयो होला ? आममानिसको जिज्ञासा भइरहेका बेला नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले करिब डेढ करोड खर्च भएको अनुमान लगाएका छन् ।
उनका अनुसार केमा कति खर्च–
झापादेखि क्याटरिङ– ६५० प्रति प्लेटका दरले ६ हजार जनाको ३९ लाख रुपैयाँ
२. दुई हजार थान डायरी र पेन वितरण– औसत रू ५००प्रति सेटको १० लाख रुपैयाँ
३. करिब १००० थान टोपी र ज्याकेटको औसत १५ सयप्रति सेटको १५ लाख रुपैयाँ
४. चार वटा हेलिकप्टर खर्च ( कम्तिमा एउटा हेलिकप्टरको २ लाख रुपैयाको दरले ८ लाख रुपैयाँ
५. दुई हजार थान साडी र पछ्यौरा ३ हजारका दरले ६० लाख रुपैयाँ
६. अन्य सरकारी खर्च १० लाख रुपैयाँ
पूर्व सचिव उपाध्यायले प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मोत्सवको कूल खर्च १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ न्युनतम निकाल्दै सालाखाला करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान लगाएका छन् ।